I-Final Fantasy VIII Ye-Android ne-iOS Manje Isiyatholakala 
Ukulinda sekuphelile manje kubalandeli beFinal Fantasy VIII. Noma ngabe ungumsebenzisi we-Android noma umsebenzisi we-iOS, umdlalo manje usutholakala ngokusemthethweni kuwo womabili amafoni.
Ngakho-ke, ungalanda i-Final Fantasy VIII Remastered Apk yezingcingo ze-Android ku-Google Play Isitolo.
Ngenkathi nge-iOS ungalanda Ifayela Lokugcina le-Fantasy 8 eliqoshwe kabusha ku-App Store esemthethweni yakwa-Apple.
Kodwa-ke kukhona izindaba ezishaqisayo kubalandeli ukuthi kuzofanele bakhokhe futhi bathenge lo mdlalo ezitolo ezisemthethweni. Ngaphandle kwalokho, ngeke ukuthole mahhala.
Kuyini iFinal Fantasy VIII?
Final Fantasy VIII noma I-Final Fantasy 8 ingenye yemidlalo ye-RPG ethandwa kakhulu kusukela ngeminyaka yawo-'90s. Yaqala ukwethulwa ngoFebhuwari 11, 1999, kumadivayisi angewona amaselula. Ngaleso sikhathi ungadlala umdlalo kuma-PC noma ku-PS nohlobo lwamadivayisi we-Xbox. Nokho, manje isiyatholakala kumakhalekhukhwini we-Android ne-iOS.
Ithengise cishe izigidi zamayunithi ayo emhlabeni jikelele. Ngemva kwalolo dumo nothando oluvela kubalandeli, ekugcineni sebethule i-Final Fantasy 8 Remastered Android Apk for Androids. Baphinde bethula ifayela le-IPA lamadivayisi we-iOS, ongalilanda ku-Apple Store.
Kodwa-ke, lo ngumdlalo okhokhelwayo. Ngakho-ke, kufanele ukhokhe inani lama- $ 16.99 ngenguqulo ye-Android. Intengo iyefana kubasebenzisi be-iPhone noma i-iOS. Ngakho-ke, ungamane uvakashele ama-App Stores afanele bese ukhokha intengo. Kamuva uzokwazi ukulanda noma ukufaka umdlalo kumadivayisi akho.
Kodwa-ke, ngokusho kweziphathimandla, kunezinkinga ezithile abasebenza ukuzilungisa. Ngakho-ke, uzobhekana nenkinga ethile kumadivayisi athile hhayi kuwo wonke amafoni. Ngakho-ke, bacele abalandeli babo ukuthi behlise umoya balinde izimbungulu zilungiswe.
I-Final Fantasy VIII Gameplay ekhishwe kabusha
Umdlalo wokugcina we-Final Fantasy 8 wamafoni weselula usekelwe ezimpini noma empini. Uzobhekana nesimo esishubile njengoba iRiphabhlikhi yaseGalbadia ihlanganise amabutho ayo alwa nomhlaba wonke. Ngokuyisisekelo, u-Edea ubusa iRiphabhlikhi yaseGalbadia ongundlovukayiphikiswa.
Kepha kunamandla athile futhi, azama ukwenza umfelandawonye omelene nalowo mbusi ononya. Ngakho-ke, lawo mabutho afaka i-Squall, i-SeeD Rinoa. Ngokuyinhloko, i-Squall ne-SeeD ngamabutho amabili e-elite ehlukile. Ngakho-ke, bazojoyina iRinoa eyisilwi esizimele.
Ngakho-ke, lawo yimibutho eyenze umbimbi lokulwa neRiphabhlikhi yaseGalbadia. Ngakho-ke, bangavimba u-Edea ekufezeni izinhloso noma izinto zakhe zobushiqela. Empeleni, izama ukubhubhisa umhlaba wonke futhi ibambe izizwe zibuse phezu komhlaba.
Ingabe iFinal Fantasy VIII ibuyiselwe mahhala kumafoni weselula we-Android ne-iPhone?
Yebo, sengivele ngikuxoxile lokho ezigabeni ezingenhla. Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, lolu hlelo lokusebenza lokudlala alukho mahhala, ngakho-ke, udinga ukukhokha inani elinqunyelwe. Uzothola iGame ngo- $ 16.99 kuwo womabili amaselula e-iOS nawakwa-Android. Ngaphandle kwalokho, kukhona Ukuthengwa kwe-In-Game kuyatholakala.
Mangisho ukuthi intengo ikufanele. Ngoba ihluzo zayo zisezingeni eliphakeme futhi uzoba nezici eziningi ezihlaba umxhwele. Ngaphezu kwalokho, ungaba negeyimu ethokozisayo. Ngakho-ke, ngingahle ngiphakamise ukuthi uzame lokhu bese uzijabulisa.
Izici Eziyinhloko Zomdlalo
Ngakho-ke, nazi ezinye izici ezijabulisa kakhulu ozoba nazo ku-Final Fantasy VIII Android noma kolunye uhlelo. Lapha ngenze uhlu lwalezo zici nonke okudingeka nazi ngazo.
Ihlinzeka nge-Battle Assist yabasebenzisi bamafoni weselula.
Ungaba neMax Out HP ne-ATB ngesikhathi sempi.
Ungasebenzisa i-Limit Breaks nganoma yisiphi isikhathi empini noma kumdlalo.
Ungaba nenketho yokuvala noma kwi-Battle Encounters.
Lapho uzoba ne-3x Speed ​​ukusika izigcawu ezihlukile bese uqhubekela ezigcawini ezilandelayo.
Izinhlamvu ezintsha eziningi.
Ihluzo ezisezingeni eliphakeme zikunikeza indawo eyiqiniso.
Izinhlamvu Zokugcina ze-Fantasy VIII
Nalu uhlu lwazo zonke lezo zinhlamvu ozoba nazo kuFinal Fantasy 8 Apk. Ngakho-ke, okulandelayo yizinhlamvu eziyinhloko ze-Final Fantasy 8.
Manje Lezi ezingezansi ezinye izinhlamvu ozoba nazo kulo mdlalo.
IGeneral Fury Caraway
IMeya uDobe noFlo
Amalungu amancane we-SeeD
Ungalanda Kanjani i-Final Fantasy VIII eyenzelwe kabusha i-Apk yezingcingo ze-Android?
Yebo, awukwazi ukuyilanda ngqo njengoba kungumdlalo okhokhelwayo. Ngakho-ke, kuzofanele uvakashele i-App Store esemthethweni ye-Android eyi-Google Play. Ngakho-ke, lapho uzothola umdlalo, ngakho-ke, khokha intengo bese ufaka ngqo umdlalo kusuka lapho. Ngakho-ke, nasi isixhumanisi esisemthethweni se- umdlalo we-Android.
Ungalanda Kanjani I-Final Fantasy 8 Remastered IPA Yamaselula e-iOS?
Inqubo yamadivayisi we-Android ne-iOS iyafana. Ngakho-ke, udinga ukuvakashela isikhulu App Store lapho uzothola umdlalo. Ngakho-ke, lapho udinga ukukhokha u- $ 16.99 bese uyifaka ngqo kumadivayisi wakho we-iOS. Kodwa-ke, awunakuba nezinguqulo zemidlalo noma zamahhala zomdlalo noma yikuphi ku-inthanethi.
Nazi ezinye izindaba noma izindaba ongafuna ukuzifunda njenge, ISAHLUKO 2 ISAHLUKO 6 ISIKHATHI XNUMX, I-PS4 Emulator ye-Android, Futhi Ungayithola Kanjani Ngokusebenzisa i-Ludo Ninja Apk Old Version?
Ekubuyekezeni kwanamuhla, ngizamile ukuxoxa ngomdlalo osanda kwethulwa odume kakhulu weFinal Fantasy VIII Wenziwe kabusha. It is umkhankaso omakhalekhukhwini Android kanye iOS Smartphones kanye nama-Tablets. Ngakho-ke, ungaba nayo kuphela kumadivayisi ashiwo.
Izigaba Guide Amathegi I-Final Fantasy 8 i-Apk eyenziwe kabusha ye-Android, I-Final Fantasy 8 i-Apk eyakhiwe kabusha, I-Final Fantasy VIII ye-Android ne-iOS isiyatholakala manje, I-Final Fantasy VIII i-Apk eyakhiwe kabusha Imeyili kwemikhumbi
Ukulanda kwe-Racing Master Apk Ye-Android [Umjaho wango-2022]
Ukulanda kwe-OLA Tv Pro kwe-Android [Kubuyekezwe ngo-2022]